Ama-eReaders nama-ebook: Konke mayelana nokufundwa kwedijithali kanye nokufunda nge-elektroniki | Onke ama-eReaders
Abafundi: abafundi be-elekthronikhi
Simunye iwebhusayithi ekhethekile kubafundi nasekufundeni kwedijithali. Sihlaziya futhi sihlole wonke amamodeli akhona emakethe futhi sikutshela ngamandla nobuthakathaka babo.
Umfundi ohamba phambili?
Umbuzo wakudala. Uma ufuna ukuya ngqo ephuzwini, sincoma 2.
Izindaba zebhulogi zakamuva
Uma ufuna ukuba sesikhathini, lezi yizindaba zakamuva esizishicilele lezi yizindaba zakamuva ezivela kumikhiqizo emakethe nasemhlabeni we ukushicilela nokufunda ngedijithali ngendlela esekhompyutheni.
I-Kindle Paperwhite (2021) - Buyekeza
I-SPC Dickens Light Pro - Enye indlela enhle engabizi [Ukuhlaziya]
I-Kobo Sage, ukubheja ngama-audiobook kanye ne-stylus [Ukuhlaziya]
Ukubuyekezwa kwawo wonke amadivayisi
Siyahlola futhi sihlaziya i-e-reader ngayinye kahle, amasonto, ukukutshela ukuthi isipiliyoni sangempela sokusebenzisa ngayinye yamadivayisi sinjani.
Iphuzu lethu eliqinile ukuthi sibahlolile abaningi kakhulu ukuthi singawaqhathanisa bese sikutshela amandla nobuthakathaka bomunye nomunye ngokuqhathaniswa nomncintiswano wawo.
Amazon Kindle, izinkampani, Ama-eReaders, Hardware
Konke mayelana ne-Amazon ne-Kindle yakho
Akunakuphikwa ukuthi Kindle namuhla amadivayisi asetshenziswa kakhulu ngabafundi. Ngakho-ke sikushiya lokhu Kindle special, ngezifundo eziningi namasu ukuze uthole okuningi ku-ebook yakho ye-Amazon.
Kindle Oasis, manje ene ...
Uma ufuna ukuthenga i-ereader imininingwane elandelayo kanye ne ukuqhathanisa kwabafundi kuzokusiza
Isifundi esihle kakhulu ngekhwalithi - intengo
Uma sikhuluma ngenani lemali, siyaqhubeka nokuncoma i-Kindle Paperwhite njengomfundi ofunda kahle kakhulu
Uma ufuna ukubuyekeza amamodeli athakazelisa kakhulu asemakethe njengamanje, bheka lawo esiwaphakamisayo
Okubalulekile ku-ereader / ebook
Iminyaka iyahamba futhi abafundayo baya ngokuya behlanganiswa futhi bathuthukiswa amadivayisi.Izici eminyakeni edlule esazivivinya ngazo ukunquma ukuthi imuphi umfundi okufanele athenge oseshintshile. Ngakho-ke namuhla ukukhanyisa cishe kuyisibopho, kanti eminyakeni embalwa edlule besingacabangi ukuthi kungaba njalo.
Ngakho-ke, yini okufanele siyibheke ku-2019 uma sifuna ukuthenga noma ukukhetha i-ereader?
Njengakuyo yonke into, kufanele sikhumbule inhloso esifuna ukuyinika yona.
Usayizi wesikrini nokulungiswa
Usayizi wesikrini wabafundi bakudala bekungama-6 ″ futhi amamodeli amaningi wamanje aqhubeka nalolo sayizi. Kepha kunabafundi abaningi abasha abasha, abanezikrini eziyi-8 no-10..
Isifundi esingu-6 is silawuleka kalula futhi kulula ukusithutha. iba nesisindo esincane uma siyibamba. Kepha i-10 ″ eyodwa uma singahambisi isinikeza umuzwa omuhle kakhulu.
Ngokuqondene nesinqumo njengamanje abafundi abasezingeni eliphakeme basebenza ngama-dpi angama-300 (amaphikseli nge-intshi ngayinye) kanye nokunye okuyisisekelo nge-166 dpi. Kulokhu kuba ngcono kakhulu ngoba sizothola incazelo engcono
Kuyisici sakamuva noma ukusebenza okungeziwe kubafundi be-e. Kungenza umehluko ekuthengeni kwakho. Ukukhanyisa okungafanele kuzokwakha izithunzi futhi kukunikeze ulwazi olubi lokufunda.
Abafundi abanokukhanya balapha ukuhlala, kuhle bafika kudala, kepha manje noma iyiphi i-ebook eyisisekelo isivele iyifaka. Imikhiqizo emikhulu iyibeke ngokuzenzakalela futhi emincane ezoncintisana ayinakho okunye ngaphandle kokuyifaka kuzo zonke izinhlobo zazo.
Ukukhanyisa kungenye yezinto ezenza impilo yebhethri ereader ibe mfushane.
Ezingeni lesistimu yokusebenza, bahlukaniswa ngamaqembu ama-2, lawo ane-software yawo kanye nalawo asebenzisa i-Android, okungenye yezentuthuko zakamuva ezijoyinwa yimikhiqizo eminingi.
Kuze kube manje umfundi ngamunye ufunda ngesoftware yakhe, i-Kindle neKobo ipholishiwe impela futhi inobungane futhi iyazi kahle. Kepha isikhathi esithile futhi ikakhulukazi kwimikhiqizo engaziwa kakhulu baqale ukusebenzisa i-Android ebavumela (uma beyisebenzisa kahle) ukuthola imikhiqizo emikhulu kulokhu.
Izinzuzo ze-Android ku-ereader ziningi:
Singafaka inombolo enkulu yezinhlelo zokusebenza ezandisa imisebenzi namathuba we-reader yethu. Ukuyifunda nokuyifunda kamuva kwezinhlelo zokusebenza ezinjenge-Getpocket, Instapaper, njll. Singakwazi ukufaka nezinhlelo zokusebenza ze-Kindle ne-Kobo futhi sifinyelele kuma-akhawunti ethu kulezi zingxenyekazi.
Okufanele sikuqaphele ukushelela. I-Andorid ku-ereader enamandla amancane, iya kuma-jerks futhi yakhe isipiliyoni esingajabulisi.
Kepha ikusasa lemikhiqizo eminingi lizoba ne-Android ukuze ikwazi ukuncintisana nabakhulu.
AmaBrands amakhulu uma sikhuluma ngabafundi, yibo abavelele ngekhwalithi yabo kanye nohlelo lwemvelo I-Amazon Kindle y I-Kobo nguRakuten.
Bese kuba khona amanye amaNook, amaTagus, Tagoni, BQ, Sony, iLikbook, i-Onyx. Sinezigaba ezikhethekile ngayinye yazo futhi sifuna ukuthi uthole ukuthi yini enye yazo engakunikeza yona.